Abaalmarinta Abaalmarinta: Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Abaalmarinta Abaalmarinta
Hay'adda Reward Foundation waa hay'ad samafal waxbarasho oo hormuud ah oo eegaysa sayniska ka dambeysa galmada iyo xiriirka jacaylka. Nidaamka abaalmarinta maskaxdu wuxuu isu beddelay inuu noo kaxeeyo abaalmarinta dabiiciga ah sida cuntada, isku xidhka iyo jinsiga si kor loogu qaado badbaadadayada.
Maanta, tikniyoolajiyadda internetka waxay soosaartay noocyo 'supernormal' ah oo ah abaalmarinnadaas dabiiciga ah qaab cunnooyinka qashinka ah, warbaahinta bulshada iyo filimada internetka. Waxay bartilmaameedsanayaan oo ay si xad dhaaf ah uga qiyaas qaadanayaan aagga maskaxda ugu jilicsan, nidaamka abaalmarinta. Helitaanka fudud ee filimada qaawan ee internetka iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada moobiilka ayaa kordhisay halista waxyeellada ka timaadda xad-dhaafka Maskaxdeenu uma ay soo bixin si ay ula qabsato sarre kacsiga noocan ah. Bulshadu waxay la kulmaysaa qarax cilado dabeecadeed iyo balwado ka dhashay natiijada.
Abaalmarinta Abaalmarinta waxaan si gaar ah diiradda u saarnaa qaawan internetka. In kasta oo aan jeclaan lahayn inaan diirada saarno cilaaqaadka jacaylka caafimaadka leh, suurtagal maaha inaan sidaa yeelno iyadoon laga wada hadlin doorka sawir-gacmeedka maanta. Waxaan eegeynaa saameynta ay ku leedahay caafimaadka maskaxda iyo jirka, xiriirka, hanashada iyo dambiyada. Waxaan higsaneynaa inaan ka dhigno cilmi-baarista taageerta mid ay heli karaan kuwa aan cilmiga u lahayn si qof walba uu u sameeyo xulashooyin xog-ogaal ah oo ku saabsan isticmaalka filimada qaawan ee internetka.
Inkastoo waxoogaa soo-gaadhis ah oo ka muuqda sawir-maskaxdu waxay noqon kartaa mid aan khatar u ahayn qaar, korodhka saacadaha la daawanayo iyo noocyada la arko waxay horseedi karaan dhibaatooyin aan loo baahnayn oo ku saabsan hawlaha bulshada, shaqada, iyo waxqabadka caafimaadka dadka kale. Waxay u horseedi kartaa waqtiga xabsiga, fikradda isdilka iyo dhibaatooyinka caafimaad ee kala duwan. Waxaan u maleyneynaa inaad xiiseyneyso barashada khibrada nolosha ee kuwa soo sheegey faa'iidooyinka aan fiicnayn ee ah inay joojiyaan jaahwareerka leh dhibaatooyin aan fiicneyn oo ka yimaada isticmaalka xad-dhaafka. Shaqadeenu waxay ku salaysan tahay cilmibaaris waxbarasho iyo xaalado nololeed oo dhab ah. Waxaan bixinaa hagid ku saabsan ka-hortagga iyo dhisidda adkeysiga cadaadiska iyo takoorka.
Waxaanu u diiwaangashanahay Hay'ad Sharciyaqa Scottish Foundation Incorporated SC044948, oo lagu aasaasay 23 June 2014.
Horumarinta waxbarashada iyada oo la sii wanaajinayo fahamka dadweynaha ee wareegga abaal-marinta ee maskaxda iyo sida ay uula dhaqanto jawiga, iyo
Si loo wanaajiyo caafimaadka iyada oo la sii wanaajinayo fahamka dadweynaha ee dhisidda adkeysiga cadaadiska.
Faahfaahin buuxda ee Reward Foundation waxay ka diiwaan gashan tahay Xafiiska Hay'adda Hay'adda Samafalka ee Scottish Foundation waxayna diyaar u tahay Website-ka OSCR. Soo noqoshadayada sanadlaha ah, oo sidoo kale loo yaqaan Warbixintayada Sannadlaha ah, ayaa sidoo kale laga heli karaa OSCR boggaas.
Mary Sharpe, Advocate, waxay noo ahayd agaasime guud ilaa Maarso 2021. Ilaa caruurnimadii Mary waxaa ku soo jiitay awooda maskaxda. Waxay ku baaqeysaa khibradeeda xirfadeed, tababarka iyo deeqda waxbarasho si ay uga caawiso The Reward Foundation wax ka qabashada arrimaha dhabta ah ee jacaylka, galmada iyo internetka. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Mary guji halkan.
Dr Darryl Mead waa Guddoomiyaha Hay'adda Reward Foundation. Darryl waa khabiir ku xeel dheer internetka iyo da'da macluumaadka. Wuxuu aasaasay xaruntii ugu horreysay ee bilaashka ah ee internetka dadweynaha ee Scotland 1996 wuxuuna kula taliyay dowladaha Scottish-ka iyo Boqortooyada Midowday UK caqabadaha ka imanaya u gudubka bulshada dijital ah. Darryl waa xubin ka tirsan Machadka Kutubta Maktabadda iyo Xirfadleyda Macluumaadka.
Anne Darling waa tababare iyo lataliye shaqo bulsho. Waxay bixisaa tababarka Ilaalinta Carruurta dhammaan heerarka shaqaalaha shaqaalaha waxbarashada ee madaxa banaan. Waxay sidoo kale u fidisaa kulanno waalidiinta dhammaan dhinacyada nabadgelyada internetka. Waxa ay ahayd Safiirka CEOP ee Scotland waxayna gacan ka geysatey sidii loo abuuri lahaa 'Ilaalinta nafsadeyda' ee caruurta yar yar ee hoose.
Mo Gill wuxuu ku biiray Gudigeena 2018. Waxay tahay xirfadle sare oo ah HR, Hawlaha Horumarinta Ururada, Fududeeyaha, Dhexdhexaadiyaha, iyo Tababaraha oo leh khibrad sannado 30 ah oo ku saabsan horumarinta ururada, kooxaha iyo shaqsiyaadka. Mo wuxuu ka shaqeeyay qaybaha dadweynaha, gaarka loo leeyahay iyo kuwo iskaa wax u qabso ku leh doorarro kala duwan oo si fiican ula shaqeeya shaqada The Reward Foundation.